ငယျ – My Blog
မိနျးမရဲ့ အဖုတျလေးထဲ ဆောငျ့ခကျြ ပွငျးပွငျးတှနေဲ့ ဝငျနတေဲ့ လီးကွီးကို ကွညျ့ပွီး စိတျထဲ ကနြေပျ အားရနတေယျ။ သိပျလိုခငျြခဲ့ တဲ့ ကြှနျတျော ရနပွေီ။ လုပျခငျြပွီဆိုရငျ စနဈတကြ ၊ သခြောပွငျဆငျပွီး ဖွဈအောငျ လုပျလရှေိ့တဲ့ အတိုငျး မိနျးမကို နားလညျ အောငျ ပွောပွ၊ သူလကျခံတော့ လူရှာ၊ ၂ ယောကျလုံး သဘောကတြဲ့သူကို ရှေး။ အပွနျအလှနျ သဘောတူညီမှုယူ။ လိုအပျတဲ့ ဆေး စဈမှုတှေ လုပျခိုငျး၊ မိနျးမ အဆငျပွတေဲ့ ရကျကို သခြောရှေးပွီးမှ ဒီလို နမြေို့းကို ရောကျလာခဲ့တာပါ။
လိုးဆောငျ့ခကျြ ကွမျးကွမျး တှနေဲ့ မိနျးမလေး အလိုးခံနရေပွီ။ တအငျးအငျး … နဲ့ အံလေးကွိတျပွီး ခံစားနရေရှာတယျ။ မိနျးမ မကျြနှာမှာ ဖွဈနတေဲ့ အမူအရာ နဲ့ ထှကျနတေဲ့ အသံ၊အလိုးခံနရေတဲ့ မိနျးမတကိုယျလုံးကို ပွနျမွငျနရေတယျ။nမိုကျတယျဗြာ ကွညျ့ရတာ…….. တခါတခါ လှမျး ကွညျ့တဲ့ မိနျးမရဲ့ အကွညျ့တှမှော အားနာမှု ကြေးဇူးတငျမှု၊ မခြိတငျကဲ ခံစားရမှု။ အားရမှု .. တှပေါတဲ့ တှဟော ကြှနျတေျာ့ စိတျကို အရမျးကွှစတေယျ။
ပုံမှနျဆို ကြှနျတေျာ့လိငျတံတောငျ့တငျး ဖို့ကို တျောတျော ကွိုးစားယူရပါတယျ။ ပွညျ့ပွညျ့၀၀ တောငျမတျတာမြိုး မရှိပဲ၊ ပြော့နေ တတျတယျ။ အခုတော့ ကြှနျတေျာ့ လိငျတံဟာ အခါတိုငျးတှနေဲ့ မတူပဲ တောငျ့တငျးထောငျမတျလို့ နတောမြား.. ကိုယျ့ကိုကိုယျ တောငျ အံ့သွမိပါရဲ့။ မိနျးမကို လိုးနတေဲ့ တဈယောကျကို ကွညျ့တော့ သူအလုပျကို သူလုပျနတေယျ။ ဘယျလိုအခြိနျမှာ ဘာလုပျ၊ ဘာပွီး ဘာလုပျ ဆိုတာကို သိနတေယျ။ မကျြနှာက မတညျလှနျး မပြော့လှနျးနဲ့ သူ့ပုံစံဟာ ဆနျနသေလိုပဲ။
သူ့ဦးဆောငျမှုနဲ့ နောကျ တဈခုကို ပွောငျးလိုကျတယျ။ သူက ပကျလကျလှနျပွီး လှဲခလြိုကျတယျ။ စငျးပွီး ဖွောငျ့နတေဲ့ သူ့လီးကွီးဟာ အပျေါကို မတျပွီး အ ကြောတှေ ထောငျနတေယျ။ မိနျးမ သူ့အပျေါကို တကျခှပွီးထိုငျခလြိုကျခြိနျ အဖုတျထဲ လီးကွီး ဝငျသှားတာကို အနီးကပျကွညျ့ရတဲ့ ဖီလငျဟာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ စကားလုံးမရှိပါဘူး။
အဖုတျလေးဟာ ပွညျ့နအေောငျ စို့ထိုးထားသလို ဖွဈနတေဲ့ လီးကွီးနဲ့ လိုကျဖကျလှနျးလှတယျ။ ခါး အသာလှုပျရုံလေးနဲ့ လှုပျရှားမှုကို မိနျးမက စတယျ။ အသဈကို အနအေထား အံ ဝငျအောငျ ထိနျးညှိနေ တယျ။ လကျကို ဟိုလူ့ ရငျဘတျပျေါ အသာထောကျ အားပွု၊ တကိုယျလုံး ထိုငျထလုပျနတောမြိုး မဟုတျပဲ ခါးနဲ့ တငျပါးကိုပဲ လှုပျ ပွီး အဖုတျထဲကို လီးကွီး ဝငျအောငျ ဖိခပြွီး လိုးနတေယျ့ မိနျးမရဲ့ တကိုယျလုံးကို ပွနျမွငျနရေတယျ။ဖွေးဖွေးခငျြး အရှိနျ ရလာ တယျ။ တငျပါးကို နောကျကော့၊ အဖုတျလေးကို အပွငျကို ကားနအေောငျ ဖှငျ့ပွီး လီးကွီးပျေါ ထိုငျပွီး ကြိတျကြိတျ ဆောငျ့နတော မြား၊ ကွညျ့ရတတဲ့ ကြှနျတေျာ့ စိတျမှာ အားရခွငျး၊ ကနြေပျခွငျးတှနေဲ့ပေ့ါ။
“ကို ဒီနားလာ” ငယျက အပျေါကနထေိုငျဆောငျ့နတော အသာ အရှိနျလြော့ပွီး ကြှနျတေျာ့ကို သူ့နား ချေါတယျ။ ငယျ့ ညာဖကျကို သှား မတျတပျရပျလိုကျတော့ ငယျရဲ့ လကျက ကြှနျတေျာ့ ဒုတျကို ဖှဖှ ဆုပျကိုငျပါတယျ။ ရှနေ့ောကျ အသာ ဆှဲပွီး ထုပေးပါတယျ။ ခါတိုငျးနဲ့ မတူ ပိုပွီး တောငျ့တငျးမာနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့ ကောငျရဲ့ အတှကွေ့ောငျ့ ငယျက ကြှနျတေျာ့မကျြနှာ အသာလှမျးကွညျ့တယျ။
မွငျးစီးနရေငျး ကြှနျတေျာ့ကို ဂှငျးထုပေးနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမလေး။ ဆံပငျ ခပျဝဲဝဲကို ဘယျညာ အသာ ခေါငျးလေး ခါခါပွီး အပေး ကောငျးကောငျးနဲ့ လိုးနတေယျ့ မိနျးမ၊ အသံ ခပျအုပျအုပျကလေးနဲ့ အံကွိတျပွီး လိုးခံနတေဲ့ မိနျးမ ဟာ ကြှနျတျော သိပျလိုခငျြ ခံစား ခငျြခဲ့တဲ့ တဈယောကျသာ တဈယောကျအပျေါ ပေးနိုငျတဲ့ အကနြေပျစနေိုငျဆုံးတှေ ပေးနတောပါ။ ကြေးဇူးပါ မိနျးမရယျ။ ထုပေး တဲ့ အရြှိနျ မွနျလာသလို၊ ဆောငျ့ဆောငျ့ခနြတေယျ့ ငယျ့ရဲ့ ကိုယျဟာ လညျး ပိုအားပါပါလာတယျ။
ကိုယျခန်ဓာ ဆောငျ့လိုကျတိုငျး လှုပျနတေဲ့ နို့ ၂ လုံးဟာ စညျးခကျြနဲ့အတူ ခုနျပေါကျနတေယျ။ ငယျဟာ ကကြေနြေပျနပျနဲ့ကို အလိုးခံနတောပါ။ သူ့မကျြလုံးတှမှော မွငျနရေပွီ။ ယောကငြ်္ားရှမှေ့ာ တခွားတဈယောကျနဲ့ အလိုးခံပွီး ကိုယျ့ယောကြာင်္းကို ကနြေပျစတေဲ့ တကယျ့ တဈ ယောကျရဲ့ စိတျကို သူသှငျးလို့ ရသှားပွီ။
” ပုံစံပွောငျးရအောငျ.”… ငယျ့ကို လေးဘကျထောကျခိုငျးတယျ။ ခါးကို အသာလြော့ ၊ ဒူးကို အနတေျော ထား၊ တငျကို အနောကျကို ကားဖှငျ့ပွီး ပဈထား ပေးလိုကျတယျ။ ငယျ့အဖုတျဟာ ဖောငျးအာပွီး အနောကျကို ပွူနမှောပါ။ အနောကျဖကျ တခကျြလှညျ့ကွညျ့ တော့ အဲဒိ ကိုလေးဟာလေ၊ သူ ဒါကို တျောတျော သဘောကနြေ…. ကိုလူစိမျးရဲ့ ဒုတျကို သုံး လေး ခကျြ လောကျ ထုပွီး ငယျ့ အဖုတျကို တပေ့ေးတယျလေ။ မိနျးမကို ကိုယျတိုငျ ဒုတျကိုငျထညျ့ ပေးတဲ့ စဈစဈကွီး။
ငယျ ကွိုကျပါတယျ။ ခပျရဲရဲ ခံယူရတယျ့ ပုံစံမြိုးလို့ ခံစားရတယျ။ အနောကျကို ပွနျပွနျဆောငျ့ပေးလို့ရတော့..ပိုပွီး ထိထိမိမိ ရှိတာကိုလညျး ကွိုကျတယျ။ ကိုယျလုံးအလှ မွငျရတာမို့ ယောကငြ်္ားတှေ လညျးသဘောကတြယျလို့ ကို ပွောဖူးတယျ။ ခပျမှနျမှနျလေး အဝငျအထှကျ လုပျပေးနတေယျ။ ဝငျလာ တာ၊ ပွနျထှကျသှားတာ၊ အတှငျးနံရံတှေ ပှတျတိုကျသှားတာ၊ အားလုံးကို သခြောသိနတေယျ။
ဒီလို ဖွေးဖွေးမှနျမှနျ နဲ့ နရေ တာ တမြိုးခံလို့ ကောငျးတယျ။ ကို ငယျ့ ခေါငျးရငျးနားကို လာထိုငျတယျ။ နားနား ကပျပွီး တိုးတိုး ပွောတယျ။ အသံ ခပျ ကြိတျကြိတျ နဲ့ လငျမယား ၂ ယောကျ ပွောနကွေတယျ။ ” ကောငျး လား ငယျ “ “ဟုတျ…အဆငျပွပေါတယျ” “ငယျ ဘယျလို ခံစား ရလညျး ဆိုတာ ကွားခငျြတာ” “အျော ဟုတျတယျ ၊ ကိုယျ့မိနျးမ ကိုယျ တခွားတဈယောကျ နဲ့ လှတျပေး၊ ကိုယျတိုငျ ဒုတျကိုငျပွီး ထညျ့ပေးတယျ့ လူကွီး.. ဒုတျကွိးကွိးနဲ့ အထညျ့ခံရမှတော့ ကောငျးတာပေ့ါ ရှငျ ကမြ ကို ဇာတျသှငျးလိုကျတာလေ။
ရှငျနဲ့ တုနျးကထကျ ပိုခံလို့ ကောငျးတယျ။ သိလား… ကဲ ..ဟုတျတယျ….”” ” အား.. ငယျရယျ အဲလို ကွားရတာ ကောငျးလိုကျတာ…. ကိုယျ တအား တောငျ လာပွီ…..အား…..”‘ ငယျသိတယျ.. ကို့ကို အဲလို ပွောပေးရငျ သူ ပို စိတျလာတယျ။ တောငျလာတဲ့ ကို့ဒုတျကို ခပျသှကျသှကျထုပေးနလေိုကျတယျ။ ကိုက င ယျ့နောကျကို အသာကြျောကွညျ့ပွီး တိုးတိုး ထပျပွောတယျ။ ” ငယျ့ ဖငျနဲ့ ကိုယျလုံးတှေ၊ ကားနတေယျ့ ပေါငျတံတှေ ကွညျ့ပွီး ဟိုလူ ငယျ့ကို တကယျ စိတျပါနတေယျ ထငျတယျ”” အဲလိုလဲ ကွားရော ဒီတ ခါ စိတျထဲ တငျးခနဲ ဖွဈသှားတာ ငယျကိုယျတိုငျပါ။ ခကျြခငျြးဆိုသလို အထဲမှာ ရှဲတကျလာတယျ။
သူ လညျး သိပုံရတယျ။ ဆောငျ့ ခကျြတှေ ပိုမွနျလာတယျ။ ငယျ့ခါးကို ကိုငျပွီး ပိုငျပိုငျ နိုငျနိုငျ သူလိုးပွီ။ လေးဖကျထောကျထားတဲ့ ငယျ …ရှလေ့ကျနှဈဖကျ မခိုငျ တော့ပဲ အိပျယာပျေါ ခေါငျးကသြှားတယျ။ အဲလို မှောကျကသြှားမှ အနောကျကို ပိုကော့ပေးလိုကျသလို ဖွဈသှားပွီး.. သူ့ရဲ့ လီးဟာ အထဲကို ဆောငျ့ဆောငျ့ပွိး….လိုးတယျ။
“အ အ …အိုး…” ” အား………” ထိနျးထားတဲ့ ကွားက ငယျ အသံတှေ ထှကျမိရတော့တယျ။ ဆောငျ့ရငျး ဘယျညာ ယိမျးပေးတော့ အထဲမှာ နရောမလပျ ပေါ့။ “‘ အ… …အား… ကောငျးတယျ… ကောငျးတယျ ရှငျရယျ..” “ဆောငျ့ပေးပါ…. အဲလိုလေး…. ဖိ ဖိပွိးဆောငျ့…” ငယျကိုယျတိုငျလညျး … အနောကျကို ပွနျပွနျပွိး ဆောငျ့ပေးမိတယျ။ ကိုလူစိမျး ဆီကလညျး အဟငျးဟငျးနဲ့အသံ တှေ ထှကျလာတယျ။ ကိုက ငယျတို့ကို ကွညျ့ရငျး အံကွီး ကွိတျပွီး ဂှငျးထုနေ တယျ။ အခနျးထဲမှာ ခပျအုပျအုပျ အသားခငျြး ရိုကျမိ သံနဲ့၊ တအငျးအငျး ညညျးနကွေတယျ့ လူ ၃ ယောကျဟာ တခုခုဆီကို လုံ့လပွု အားတငျး.. အရောကျ သှားနကွေတယျ။
“”ငယျ ပွီး ခငျြပွီ” ” အ….အ….. ဆောငျ့ပေးပါ….အဲလို ဖိဖိပွီး…” “အား…. ကောငျးလိုကျတာ… နာနာလေး..ဆောငျ့ပါ ပွိးခငျြပွီ “ ” အ …. အ.. ..အား….” ဆိုတယျ့ ကိုလူစိမျးဆီက အသံနဲ့ ငယျ့အထဲမှာ နှေးကနဲ အတှမှေ့ာ.. ” ပွီးပွီ. ငယျ ပွီးပွီ…အား…..” ကောငျးလိုကျ တာ…ပွိုငျတူ ပွီးရ တာ.။ သူက အသာ ဆကျဆောငျ့ပေးနတေုနျး..။ ငယျ့ အဖုတျထဲမှာ တဖွေးဖွေး အရညျတှေ ပွညျ့ပွညျ့လာနေ တာ ခံစားရတယျ။
သူ့ဒုတျကို အသာ ဆှဲထုတျသှားတယျ့ အသိ၊ ” ဝငျတော့…” ဆိုတယျ့ အသံကို ကွားရတယျ။ ကို့လီးက လေးဖကျထောကျနဆေဲ ငယျ့ အဖုတျထဲကို ဝငျလာ တယျ။ မှုနျယိုနတေဲ့ ဆငျလို ကွမျးတော့တာပဲ။ အရမျးး ကွမျးတယျ… ကို့ဆောငျ့ခကျြတှေ။ ” အား…ငယျ့ အထဲမှာ အရညျတှေ ရှဲနတေယျ.” အား….ကို ကွိုကျတယျ ကောငျးလိုကျတာ….အား…..”” သိပျအားပါတဲ့ ကို့ဆောငျ့ခကျြတှကေို အသာညှဈပွီး ကွိုပေးမိတယျ။ ခဏ အကွာမှာတော့.. ” အ အ.. အား..” ကို့ အရညျတှေ အထဲကို ပနျးဝငျလာတယျ။ ကိုဟာ တ အငျးအငျးနဲ့ ကနြေပျစှာ ပွီးဆုံးခငျြးကို ခံစားနတေယျ။ အထဲမှာ သူတို့ ၂ ယောကျရဲ့ အရညျ တှေ ရောကုနျပွီ။ လငျမယား ၂ ယောကျ အိပျယာပျေါ အသာလှဲခမြလို့ လုပျတုနျး တံခါး ပွနျပိတျသံ ကွားလိုကျရတယျ။
ကိုလူစိမျး သူ့အခနျးကို သူပွနျတာ။ အိပျယာပျေါ ကို့ ရငျခှငျထဲ ဝငျတော့…. ကိုက ငယျ့နဖူးကို အသာနမျးတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ… ငယျလေးရယျ တဲ့။ ကနြေပျခွငျး..၊ ပြျောရှငျခွငျး တှနေဲ့ ကို့ မကျြဝနျးတှေ ဟာ အရညျလဲ့နတေယျ။ အမောဖွရေငျး ကို့ မကျြနှာကို ကွညျ့နမေိတယျ။ငယျခံစားခကျြလား… ဟုတျကဲ့… ကွိုကျပါတယျ၊ ပထမတော့ နညျးနညျး ရှိုးတိုးရှနျ့တနျ့ ဆိုပမေယျ့ လိငျစိတျဝငျသှားတဲ့ အခြိနျမှာ အဲလို ကိုယျ့ယောကြာင်္းရှမှေ့ာပဲ နပွေရတာကိုက ခံစားမှု တမြိုး။ ဒုတျ ကွီးကွီးနဲ့ အလုပျခံရတော့ ပိုအားရတယျ။ ကို စိတျခမျြးသာအောငျ ထားပေးလိုကျနိုငျတဲ့ အတှကျလညျး စိတျထဲ ကွညျနူးရတယျ။ လူမှုရေး ရှ့ထောငျ့က ကွညျ့ရငျရော၊ ကိုယျ့ ယော ကြာင်္းတဈယောကျလုံးက တောငျးဆို တာပဲ။
စိတျထဲမှာ အားရတယျ ဆိုတာ ခံစားမှု သကျသကျပါ။ ကို့ကို ခဈြတဲ့စိတျ၊ မွတျနိုးတဲ့ စိတျ အဲဒါတှကေ အရငျထကျတောငျ ပိုတိုးလာ ပါသေးတယျ။ ငယျ နဲ့ ကိုနဲ့ ဒီကိစ်စ စစီစဉျတုနျးက ကိုပွောထားတာလေး သတိရတယျ။ မှားတယျ မှနျတယျ ဆိုတာ ကွညျ့တဲ့ အမွငျ ပျေါ မူတညျတယျတဲ့။ ဟုတျတယျ… ငယျလေး သဘောတူတယျ။ “””တူညီတဲ့ ရှု့ထောငျ့က ကွညျ့ရငျ အဖွဈအပကျြတိုငျးဟာ မှနျ တယျလေ…””ိပွီးပါပွီ။ ခငျမငျလေးစားလကျြ
မိန်းမရဲ့ အဖုတ်လေးထဲ ဆောင့်ချက် ပြင်းပြင်းတွေနဲ့ ဝင်နေတဲ့ လီးကြီးကို ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲ ကျေနပ် အားရနေတယ်။ သိပ်လိုချင်ခဲ့ တဲ့ ကျွန်တော် ရနေပြီ။ လုပ်ချင်ပြီဆိုရင် စနစ်တကျ ၊ သေချာပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်အောင် လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အတိုင်း မိန်းမကို နားလည် အောင် ပြောပြ၊ သူလက်ခံတော့ လူရှာ၊ ၂ ယောက်လုံး သဘောကျတဲ့သူကို ရွေး။ အပြန်အလှန် သဘောတူညီမှုယူ။ လိုအပ်တဲ့ ဆေး စစ်မှုတွေ လုပ်ခိုင်း၊ မိန်းမ အဆင်ပြေတဲ့ ရက်ကို သေချာရွေးပြီးမှ ဒီလို နေ့မျိုးကို ရောက်လာခဲ့တာပါ။
လိုးဆောင့်ချက် ကြမ်းကြမ်း တွေနဲ့ မိန်းမလေး အလိုးခံနေရပြီ။ တအင်းအင်း … နဲ့ အံလေးကြိတ်ပြီး ခံစားနေရရှာတယ်။ မိန်းမ မျက်နှာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အမူအရာ နဲ့ ထွက်နေတဲ့ အသံ၊အလိုးခံနေရတဲ့ မိန်းမတကိုယ်လုံးကို ပြန်မြင်နေရတယ်။nမိုက်တယ်ဗျာ ကြည့်ရတာ…….. တခါတခါ လှမ်း ကြည့်တဲ့ မိန်းမရဲ့ အကြည့်တွေမှာ အားနာမှု ကျေးဇူးတင်မှု၊ မချိတင်ကဲ ခံစားရမှု။ အားရမှု .. တွေပါတဲ့ တွေဟာ ကျွန်တော့် စိတ်ကို အရမ်းကြွစေတယ်။
ပုံမှန်ဆို ကျွန်တော့်လိင်တံတောင့်တင်း ဖို့ကို တော်တော် ကြိုးစားယူရပါတယ်။ ပြည့်ပြည့်၀၀ တောင်မတ်တာမျိုး မရှိပဲ၊ ပျော့နေ တတ်တယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော့် လိင်တံဟာ အခါတိုင်းတွေနဲ့ မတူပဲ တောင့်တင်းထောင်မတ်လို့ နေတာများ.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် တောင် အံ့သြမိပါရဲ့။ မိန်းမကို လိုးနေတဲ့ တစ်ယောက်ကို ကြည့်တော့ သူအလုပ်ကို သူလုပ်နေတယ်။ ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဘာလုပ်၊ ဘာပြီး ဘာလုပ် ဆိုတာကို သိနေတယ်။ မျက်နှာက မတည်လွန်း မပျော့လွန်းနဲ့ သူ့ပုံစံဟာ ဆန်နေသလိုပဲ။
သူ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ နောက် တစ်ခုကို ပြောင်းလိုက်တယ်။ သူက ပက်လက်လှန်ပြီး လှဲချလိုက်တယ်။ စင်းပြီး ဖြောင့်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးဟာ အပေါ်ကို မတ်ပြီး အ ကျောတွေ ထောင်နေတယ်။ မိန်းမ သူ့အပေါ်ကို တက်ခွပြီးထိုင်ချလိုက်ချိန် အဖုတ်ထဲ လီးကြီး ဝင်သွားတာကို အနီးကပ်ကြည့်ရတဲ့ ဖီလင်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် စကားလုံးမရှိပါဘူး။
အဖုတ်လေးဟာ ပြည့်နေအောင် စို့ထိုးထားသလို ဖြစ်နေတဲ့ လီးကြီးနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းလှတယ်။ ခါး အသာလှုပ်ရုံလေးနဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို မိန်းမက စတယ်။ အသစ်ကို အနေအထား အံ ဝင်အောင် ထိန်းညှိနေ တယ်။ လက်ကို ဟိုလူ့ ရင်ဘတ်ပေါ် အသာထောက် အားပြု၊ တကိုယ်လုံး ထိုင်ထလုပ်နေတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ခါးနဲ့ တင်ပါးကိုပဲ လှုပ် ပြီး အဖုတ်ထဲကို လီးကြီး ဝင်အောင် ဖိချပြီး လိုးနေတယ့် မိန်းမရဲ့ တကိုယ်လုံးကို ပြန်မြင်နေရတယ်။ဖြေးဖြေးချင်း အရှိန် ရလာ တယ်။ တင်ပါးကို နောက်ကော့၊ အဖုတ်လေးကို အပြင်ကို ကားနေအောင် ဖွင့်ပြီး လီးကြီးပေါ် ထိုင်ပြီး ကျိတ်ကျိတ် ဆောင့်နေတာ များ၊ ကြည့်ရတတဲ့ ကျွန်တော့် စိတ်မှာ အားရခြင်း၊ ကျေနပ်ခြင်းတွေနဲ့ပေ့ါ။
“ကို ဒီနားလာ” ငယ်က အပေါ်ကနေထိုင်ဆောင့်နေတာ အသာ အရှိန်လျော့ပြီး ကျွန်တော့်ကို သူ့နား ခေါ်တယ်။ ငယ့် ညာဖက်ကို သွား မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့ ငယ်ရဲ့ လက်က ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို ဖွဖွ ဆုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ရှေ့နောက် အသာ ဆွဲပြီး ထုပေးပါတယ်။ ခါတိုင်းနဲ့ မတူ ပိုပြီး တောင့်တင်းမာနေတဲ့ ကျွန်တော့် ကောင်ရဲ့ အတွေ့ကြောင့် ငယ်က ကျွန်တော့်မျက်နှာ အသာလှမ်းကြည့်တယ်။
မြင်းစီးနေရင်း ကျွန်တော့်ကို ဂွင်းထုပေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမလေး။ ဆံပင် ခပ်ဝဲဝဲကို ဘယ်ညာ အသာ ခေါင်းလေး ခါခါပြီး အပေး ကောင်းကောင်းနဲ့ လိုးနေတယ့် မိန်းမ၊ အသံ ခပ်အုပ်အုပ်ကလေးနဲ့ အံကြိတ်ပြီး လိုးခံနေတဲ့ မိန်းမ ဟာ ကျွန်တော် သိပ်လိုချင် ခံစား ချင်ခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်သာ တစ်ယောက်အပေါ် ပေးနိုင်တဲ့ အကျေနပ်စေနိုင်ဆုံးတွေ ပေးနေတာပါ။ ကျေးဇူးပါ မိန်းမရယ်။ ထုပေး တဲ့ အရျှိန် မြန်လာသလို၊ ဆောင့်ဆောင့်ချနေတယ့် ငယ့်ရဲ့ ကိုယ်ဟာ လည်း ပိုအားပါပါလာတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာ ဆောင့်လိုက်တိုင်း လှုပ်နေတဲ့ နို့ ၂ လုံးဟာ စည်းချက်နဲ့အတူ ခုန်ပေါက်နေတယ်။ ငယ်ဟာ ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ကို အလိုးခံနေတာပါ။ သူ့မျက်လုံးတွေမှာ မြင်နေရပြီ။ ယောင်္ကျားရှေ့မှာ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ အလိုးခံပြီး ကိုယ့်ယောကျာင်္းကို ကျေနပ်စေတဲ့ တကယ့် တစ် ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို သူသွင်းလို့ ရသွားပြီ။
” ပုံစံပြောင်းရအောင်.”… ငယ့်ကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းတယ်။ ခါးကို အသာလျော့ ၊ ဒူးကို အနေတော် ထား၊ တင်ကို အနောက်ကို ကားဖွင့်ပြီး ပစ်ထား ပေးလိုက်တယ်။ ငယ့်အဖုတ်ဟာ ဖောင်းအာပြီး အနောက်ကို ပြူနေမှာပါ။ အနောက်ဖက် တချက်လှည့်ကြည့် တော့ အဲဒိ ကိုလေးဟာလေ၊ သူ ဒါကို တော်တော် သဘောကျနေ…. ကိုလူစိမ်းရဲ့ ဒုတ်ကို သုံး လေး ချက် လောက် ထုပြီး ငယ့် အဖုတ်ကို တေ့ပေးတယ်လေ။ မိန်းမကို ကိုယ်တိုင် ဒုတ်ကိုင်ထည့် ပေးတဲ့ စစ်စစ်ကြီး။
ငယ် ကြိုက်ပါတယ်။ ခပ်ရဲရဲ ခံယူရတယ့် ပုံစံမျိုးလို့ ခံစားရတယ်။ အနောက်ကို ပြန်ပြန်ဆောင့်ပေးလို့ရတော့..ပိုပြီး ထိထိမိမိ ရှိတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ ကိုယ်လုံးအလှ မြင်ရတာမို့ ယောင်္ကျားတွေ လည်းသဘောကျတယ်လို့ ကို ပြောဖူးတယ်။ ခပ်မှန်မှန်လေး အဝင်အထွက် လုပ်ပေးနေတယ်။ ဝင်လာ တာ၊ ပြန်ထွက်သွားတာ၊ အတွင်းနံရံတွေ ပွတ်တိုက်သွားတာ၊ အားလုံးကို သေချာသိနေတယ်။
ဒီလို ဖြေးဖြေးမှန်မှန် နဲ့ နေရ တာ တမျိုးခံလို့ ကောင်းတယ်။ ကို ငယ့် ခေါင်းရင်းနားကို လာထိုင်တယ်။ နားနား ကပ်ပြီး တိုးတိုး ပြောတယ်။ အသံ ခပ် ကျိတ်ကျိတ် နဲ့ လင်မယား ၂ ယောက် ပြောနေကြတယ်။ ” ကောင်း လား ငယ် “ “ဟုတ်…အဆင်ပြေပါတယ်” “ငယ် ဘယ်လို ခံစား ရလည်း ဆိုတာ ကြားချင်တာ” “အော် ဟုတ်တယ် ၊ ကိုယ့်မိန်းမ ကိုယ် တခြားတစ်ယောက် နဲ့ လွတ်ပေး၊ ကိုယ်တိုင် ဒုတ်ကိုင်ပြီး ထည့်ပေးတယ့် လူကြီး.. ဒုတ်ကြိးကြိးနဲ့ အထည့်ခံရမှတော့ ကောင်းတာပေ့ါ ရှင် ကျမ ကို ဇာတ်သွင်းလိုက်တာလေ။
ရှင်နဲ့ တုန်းကထက် ပိုခံလို့ ကောင်းတယ်။ သိလား… ကဲ ..ဟုတ်တယ်….”” ” အား.. ငယ်ရယ် အဲလို ကြားရတာ ကောင်းလိုက်တာ…. ကိုယ် တအား တောင် လာပြီ…..အား…..”‘ ငယ်သိတယ်.. ကို့ကို အဲလို ပြောပေးရင် သူ ပို စိတ်လာတယ်။ တောင်လာတဲ့ ကို့ဒုတ်ကို ခပ်သွက်သွက်ထုပေးနေလိုက်တယ်။ ကိုက င ယ့်နောက်ကို အသာကျော်ကြည့်ပြီး တိုးတိုး ထပ်ပြောတယ်။ ” ငယ့် ဖင်နဲ့ ကိုယ်လုံးတွေ၊ ကားနေတယ့် ပေါင်တံတွေ ကြည့်ပြီး ဟိုလူ ငယ့်ကို တကယ် စိတ်ပါနေတယ် ထင်တယ်”” အဲလိုလဲ ကြားရော ဒီတ ခါ စိတ်ထဲ တင်းခနဲ ဖြစ်သွားတာ ငယ်ကိုယ်တိုင်ပါ။ ချက်ချင်းဆိုသလို အထဲမှာ ရွှဲတက်လာတယ်။
သူ လည်း သိပုံရတယ်။ ဆောင့် ချက်တွေ ပိုမြန်လာတယ်။ ငယ့်ခါးကို ကိုင်ပြီး ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် သူလိုးပြီ။ လေးဖက်ထောက်ထားတဲ့ ငယ် …ရှေ့လက်နှစ်ဖက် မခိုင် တော့ပဲ အိပ်ယာပေါ် ခေါင်းကျသွားတယ်။ အဲလို မှောက်ကျသွားမှ အနောက်ကို ပိုကော့ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားပြီး.. သူ့ရဲ့ လီးဟာ အထဲကို ဆောင့်ဆောင့်ပြိး….လိုးတယ်။
“အ အ …အိုး…” ” အား………” ထိန်းထားတဲ့ ကြားက ငယ် အသံတွေ ထွက်မိရတော့တယ်။ ဆောင့်ရင်း ဘယ်ညာ ယိမ်းပေးတော့ အထဲမှာ နေရာမလပ် ပေါ့။ “‘ အ… …အား… ကောင်းတယ်… ကောင်းတယ် ရှင်ရယ်..” “ဆောင့်ပေးပါ…. အဲလိုလေး…. ဖိ ဖိပြိးဆောင့်…” ငယ်ကိုယ်တိုင်လည်း … အနောက်ကို ပြန်ပြန်ပြိး ဆောင့်ပေးမိတယ်။ ကိုလူစိမ်း ဆီကလည်း အဟင်းဟင်းနဲ့အသံ တွေ ထွက်လာတယ်။ ကိုက ငယ်တို့ကို ကြည့်ရင်း အံကြီး ကြိတ်ပြီး ဂွင်းထုနေ တယ်။ အခန်းထဲမှာ ခပ်အုပ်အုပ် အသားချင်း ရိုက်မိ သံနဲ့၊ တအင်းအင်း ညည်းနေကြတယ့် လူ ၃ ယောက်ဟာ တခုခုဆီကို လုံ့လပြု အားတင်း.. အရောက် သွားနေကြတယ်။
“”ငယ် ပြီး ချင်ပြီ” ” အ….အ….. ဆောင့်ပေးပါ….အဲလို ဖိဖိပြီး…” “အား…. ကောင်းလိုက်တာ… နာနာလေး..ဆောင့်ပါ ပြိးချင်ပြီ “ ” အ …. အ.. ..အား….” ဆိုတယ့် ကိုလူစိမ်းဆီက အသံနဲ့ ငယ့်အထဲမှာ နွေးကနဲ အတွေ့မှာ.. ” ပြီးပြီ. ငယ် ပြီးပြီ…အား…..” ကောင်းလိုက် တာ…ပြိုင်တူ ပြီးရ တာ.။ သူက အသာ ဆက်ဆောင့်ပေးနေတုန်း..။ ငယ့် အဖုတ်ထဲမှာ တဖြေးဖြေး အရည်တွေ ပြည့်ပြည့်လာနေ တာ ခံစားရတယ်။
သူ့ဒုတ်ကို အသာ ဆွဲထုတ်သွားတယ့် အသိ၊ ” ဝင်တော့…” ဆိုတယ့် အသံကို ကြားရတယ်။ ကို့လီးက လေးဖက်ထောက်နေဆဲ ငယ့် အဖုတ်ထဲကို ဝင်လာ တယ်။ မှုန်ယိုနေတဲ့ ဆင်လို ကြမ်းတော့တာပဲ။ အရမ်းး ကြမ်းတယ်… ကို့ဆောင့်ချက်တွေ။ ” အား…ငယ့် အထဲမှာ အရည်တွေ ရွဲနေတယ်.” အား….ကို ကြိုက်တယ် ကောင်းလိုက်တာ….အား…..”” သိပ်အားပါတဲ့ ကို့ဆောင့်ချက်တွေကို အသာညှစ်ပြီး ကြိုပေးမိတယ်။ ခဏ အကြာမှာတော့.. ” အ အ.. အား..” ကို့ အရည်တွေ အထဲကို ပန်းဝင်လာတယ်။ ကိုဟာ တ အင်းအင်းနဲ့ ကျေနပ်စွာ ပြီးဆုံးချင်းကို ခံစားနေတယ်။ အထဲမှာ သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ အရည် တွေ ရောကုန်ပြီ။ လင်မယား ၂ ယောက် အိပ်ယာပေါ် အသာလှဲချမလို့ လုပ်တုန်း တံခါး ပြန်ပိတ်သံ ကြားလိုက်ရတယ်။
ကိုလူစိမ်း သူ့အခန်းကို သူပြန်တာ။ အိပ်ယာပေါ် ကို့ ရင်ခွင်ထဲ ဝင်တော့…. ကိုက ငယ့်နဖူးကို အသာနမ်းတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ငယ်လေးရယ် တဲ့။ ကျေနပ်ခြင်း..၊ ပျော်ရွင်ခြင်း တွေနဲ့ ကို့ မျက်ဝန်းတွေ ဟာ အရည်လဲ့နေတယ်။ အမောဖြေရင်း ကို့ မျက်နှာကို ကြည့်နေမိတယ်။ငယ်ခံစားချက်လား… ဟုတ်ကဲ့… ကြိုက်ပါတယ်၊ ပထမတော့ နည်းနည်း ရှိုးတိုးရှန့်တန့် ဆိုပေမယ့် လိင်စိတ်ဝင်သွားတဲ့ အချိန်မှာ အဲလို ကိုယ့်ယောကျာင်္းရှေ့မှာပဲ နေပြရတာကိုက ခံစားမှု တမျိုး။ ဒုတ် ကြီးကြီးနဲ့ အလုပ်ခံရတော့ ပိုအားရတယ်။ ကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားပေးလိုက်နိုင်တဲ့ အတွက်လည်း စိတ်ထဲ ကြည်နူးရတယ်။ လူမှုရေး ရှ့ထောင့်က ကြည့်ရင်ရော၊ ကိုယ့် ယော ကျာင်္းတစ်ယောက်လုံးက တောင်းဆို တာပဲ။
စိတ်ထဲမှာ အားရတယ် ဆိုတာ ခံစားမှု သက်သက်ပါ။ ကို့ကို ချစ်တဲ့စိတ်၊ မြတ်နိုးတဲ့ စိတ် အဲဒါတွေက အရင်ထက်တောင် ပိုတိုးလာ ပါသေးတယ်။ ငယ် နဲ့ ကိုနဲ့ ဒီကိစ္စ စစီစဉ်တုန်းက ကိုပြောထားတာလေး သတိရတယ်။ မှားတယ် မှန်တယ် ဆိုတာ ကြည့်တဲ့ အမြင် ပေါ် မူတည်တယ်တဲ့။ ဟုတ်တယ်… ငယ်လေး သဘောတူတယ်။ “””တူညီတဲ့ ရှု့ထောင့်က ကြည့်ရင် အဖြစ်အပျက်တိုင်းဟာ မှန် တယ်လေ…””ိပြီးပါပြီ။ ခင်မင်လေးစားလျက်
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ငယျ